Taageerada uu MW Farmaajo siiyey Madeira waxaa ka muuqata 2 su’aal oo aanu is waydiin & mid kale oo ka hoos baxday! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Taageerada uu MW Farmaajo siiyey Madeira waxaa ka muuqata 2 su’aal oo...
Taageerada uu MW Farmaajo siiyey Madeira waxaa ka muuqata 2 su’aal oo aanu is waydiin & mid kale oo ka hoos baxday!
(Addis Ababa) 10 Abriil 2022 – Waxaa 7-dii Abriil soo shaac baxay cod sir ah oo laga duubay Danjiraha Midowga Afrika ee Somalia, oo sidoo kalena ah Madaxa Howlgalka ATMIS (ex AMISOM), iyadoo codkiisa laga dheehday laba arrimood oo kala ah anshax xumo diblomaasiyadeed iyo eex uu kula dhex jiro Soomaalidii la doonayey inuu u dhexeeyo.
Ururka Midowga Afrika ayaa iyaguna si qar iska tuurnimo lagu tilmaamay arrintaa uga fal-celiyey, iyagoo si rasmi ah ugu gacan sayray go’aankii uu Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble dalka uga cayriyey Danjiraha Ururka AU islamarkaana ah Madaxa Howlgalka ATMIS u qaabilsan Soomaaliya, Francisco Madeira.
Waxaa ka daran inaysan xitaa ku doodin inuu codku been abuur ahaa iwm, taasoo u ekaysiin lahayd dad leh ”dembi ma gelin”, balse waxay taa biddaalkeeda ku meeraysteen arrimo buruqraadi ah sida Madaxwaynaha ayaa weli na ogol iwm oo ah arrin diblomaasiyad ahaan dugsi hoose ah oo aan shaqayn karaynin.
Yeelkeede, si kasta oo ay ku dhamaataba aannu eegno laba arrimood oo si uga hoos baxsan MW Farmaajo oo si kal iyo laab ah iskaga taageeray kiiska Madeira, haa kelmadda iskaga taageeray ayaan adeegsanaynaa. Waayo?
1 – MW Farmaajo marka 1-aad ma tixgelin waxa ay qabaan xeerarka iyo anshaxa diblomaasiyadeed ee aan marna qof diblomaasi ah u saamaxaynin inuu sidaa u kalaamo iyo heerka ay gaarsiisan tahay xasaasiyadda arrinta uu ka hadlay oo taabanaysa wax kasta oo ay haatan isku hayaan madaxda Soomaalidu, taasoo ATMIS toos u gelinaysa khilaafka oo ay dhinac ka noqonayaan. Cawaaqib noocee ah ayay yeelanaysaa waa su’aal kale oo ka hoostay.
2 – Ku adkaysiga AU ee ah inuu sii shaqaynayo Madeira marka laga yimaado inay jiraan dad qaba inay tahay kelmad diblomaasiyadeed oo af kala bax ah, haddiiba aan ka dhigno inay ka dhab tahay sidee uga shaqayn karaa Somalia isaga oo khilaafsan Xukuumaddii DF Somalia? Ma Madaxwaynaha ayaa howshii maroorsanaya oo sida warqaddiisii Ingiriisiga ahayd ku caddayd wasaaradaha dhihi doona ”warqado soo xarxarriiqa?”.
Sideese ATMIS oo ah hay’adda haatan ka wakiilka ah ammaanka Somalia maqaamkeedu u ekaanayaa iyagoo loo arkayo cudud ku dhex milan khilaafka taagan, sideese dhinacyadu u aqbalayaan inay doorashada ilaaliyaan iyadoo uu madaxa ugu sarreeyaa sidaa u calool hadlay? Waa su’aalo aanu is waydiin MW Farmaajo.
MIDDA KA HOOSTAY MW FARMAAJO?
MW Farmaajo wuxuu ku dheggan yahay in la galay khalad buruqraadi ah oo uu isagu xaq u leeyahay la xaalidda Danjirayaasha caalamiga ah iyo inaan arrintan lagala tashan. Taasi waa runtiis, yeelkeede, xaqiiqada ah in hal tillaabo oo buruqraadi ah laga boodey sax ka dhigi mayso khaladka fadeexiga ah ee uu dhex fadhiyo Francisco Madeira. Yaa marka wayn khaladka uu ka galay dalka Somalia iyo midka laga galay MW Farmaajo? Ilaa haatan wuxuu MW Farmaajo muujiyey inuu la wayn yahay midka isaga laga galay iyo inuu taageerayo ciddii isaga u garab laalaadisa si kasta oo ay u khilaafto xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah, taasoo sii dilaysa qiyamkiisa.
Qiyaas haddii uu taageeri lagaa go’aanka Raysal Wasaaraha? Wuxuu MW Farmaajo heli lahaa kalsooni iyo taageero cusub oo uu ka heli lahaa dadka waxgaradka ah ee wax ku qiimeeya fiiro, faham iyo xaqiiqo, wuxuuna muujin lahaa inuu yahay nin qoto dheer oo aan kaliya eegin waxa ay isaga iyo qof kale isku hayaan iyo in ay isaga dani ugu jirto waxa la isku hayo e kaliya eegaya xeerka islamarkaana ilaalinaya midnimada ummada. Mase dhicin oo isna inta badan ma tala fiicna dad jarta siyaasadda dhanka fiican ee dhibcaha sahlan laga heli karo ka eeganaya malaha wax uma sheegaan.
Waxaa Qoray: Max’ed Xaaji
Previous articleWAR CUSUB: ATMIS oo bandow saartay Xerada Xalane & inta uu soconayo
Next articleXOG: RW Rooble oo la kulmaya beesha caalamka & qodobbada uu lasoo qaadayo